MW Waare oo kulankii sadaxaad oo qarsoodi ah la qaatay MD Farmaajo! Maxaa laga hadlay? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA MW Waare oo kulankii sadaxaad oo qarsoodi ah la qaatay MD Farmaajo!...
MW Waare oo kulankii sadaxaad oo qarsoodi ah la qaatay MD Farmaajo! Maxaa laga hadlay?
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo maalmahan dambe ku sugnaa Magaalada Muqadishu ayaa galabta waxa uu kulankiisii sadaxaad mudo todobo cesho gudahooda ah kula yeeshay Villa Somaliya Madaxweyne Farmaajo.
Kulankaan oo ay ku wehliyeen Madaxweyne Ku Xigeenka Dowlad Goboleedka Hirshabeele Cali Guudlaawe iyo Wasiirka Isgaarsiinta ee Dowlada Fedraalka Eng. Canshuur ayaa ah mid si qarsoodi ah loo qaban-qaabiyay.
MW Waare ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu sidoo kale kulan qarsoodi ah la qaatay RW Kheyre. MW Waare ayaa u muuqda mid ka ganacsanaayo qadiyadda Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda isaga oo ka dhuumanaayo madaxada kale ee Dowlad Goboleedyadda.
Baahin oo la xirirtay qaar ka mida masuuliyiinta xafiiska Ra’isal Wasaaraha iyo Madaxweynaha ayaa sheegay in kulankii galabta uu la yeeshay MW Farmaajo uu daba socday kulankii xalay uu la yeeshay RW Kheyre.
RW Kheyre ayaa waxa uu xalay balan qaaday in uu bixinaayo lacag joogta ah oo gaareyso $500,000 (shan boqol oo kun doolar) bilkastaa oo si qaasa loo siinaayo MW Waare hadii uu ka soo ga’o Ururka Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda.
Waare ayaa u sheegay saaxibadiisa ku dhaw-dhaw in uusan ka bixi doonin kana tanaasuli doonin qadiyadda Dowlad Goboleedyadda laakiin MW Farmaajo iyo Kheyre lacagta kaga qaadayo.
Previous articleDAAWO:Shaqsiyaad katirsan xukumada Kheyre iyo xildhibaano oo boobay guri Muqdisho kulahaa shaqsi katirsan….
Next articleSirculus Dhageyso: Saraakiil Ka tirsan DF oo la kashifay inay Xiriir Toosa la leyihiin Alshabaab iyo Taliyaal Sabab la yaab leh xilka looga qaaday
DHAGEYSO: Xildhibaan Canab” Shacabka Laasacaanood Waxaa Lagu Hayaa Mid La Mid Ah Gumeysiga Falastiin”
Ma laguu heyn lahaa taleefonkaaga haddii aad ku heleyso cunto bilaash ah?
DAAWO: Xisbiga Xoriyadda Soomaaliyeed oo Dhoola Tus Layaab Leh Kasameeyay Canada
Sawirro: Shabakad ka tirsan Al-Shabaab oo maleegayey weeraro oo lasoo bandhigay
150 qof oo la la’yahay markii ay dooni kula degtay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo
Safiirka Marakanka Ufadhiya Somaliya oo Digniin Culus Udiray Madaxda Garoowe Kushiraysa
Sawirro:-Ciidamada Amaanka Oo Muqdisho Ku Toogtay Nin Hubeysan Kuwo Kalena Dhaawacay